Ny tantaran'ny Morro de San Juan any Puerto Rico | Vaovao momba ny dia
Raha mijery ny tampon'ny San Juan taloha ianao dia afaka mahita ny Fort of San Felipe del Morro, izay fantatra ihany koa amin'ny hoe El Morro. Ity fananganana ity dia an'ny taon-jato faha-XNUMX ary natao hiarovana ny tanàna amin'ny fanafihan'ny ranomasina., fanafihana izay matetika loatra tamin'izany fotoana izany mba handresena ny tany sy handroba ny vahoaka.
Ity fort ity dia nanjary iray amin'ireo singa tena misolo tena ny tanàna taloha ary mbola velona mandraka androany. Io no iray amin'ireo tsangambato malaza indrindra na dia tamin'ny andron'ny zanatany Espaniôla aza ary izao io trano mimanda io ihany dia hita amin'ny nosy be vato ary mora hita izy satria miraikitra. Niorina tamin'ny 1539 ary tilikambo tsotra fotsiny izy io, miaraka amina endrika izay novaina am-polony taona maro taty aoriana, tamin'ny 1587 teny an-tanan'i Juan de Tejada sy Juan Bautista Antonelli mba hamadika azy io ho fiarovana mimanda miaramila espaniola namboarina tamin'izany fotoana izany ary hajain'ny rehetra.
1 Tantara kely momba an'i Morro de San Juan any Puerto Rico
2 Ny trano mimanda androany
3 Manao ahoana ny fanamafisana
Tantara kely momba an'i Morro de San Juan any Puerto Rico
Araka ny nolazaiko anao ihany, ny tantaran'ny Morro de San Juan any Puerto Rico dia nanomboka tamin'ny 1539 tamin'ny fananganana ny Espaniôla, saingy maharitra antsasaky ny zato taona vao tena mandaitra sy afaka manatontosa ilay asa izy ny trano mimanda.
Nahazo ny anarany izy noho ny Mpanjaka Felipe II avy any Espana izay nametraka azy io ary natao tsy nitoviana kely tamin'ny manda hafa izay taty aoriana dia hita tany amin'ny tany hafa toa an'i Karaiba, Repoblika Dominikanina, Cuba ary koa ao Acapulco izay nanana trano mimanda mitovy amin'izany koa mba afaka miaro tena amin'ireo fahavalo tonga teny amin'ny taniny amoron-dranomasina.
Taorian'ny 400 taona mahery taorian'ny nanombohan'ny tantara rehetra, ity fort fort-nivadika fort ity dia nanana traikefa nahafinaritra tao anatin'ny rindriny., saingy nanery ny fanovana ny rafitra tany am-boalohany. El Morro dia vakoka manerantany amin'izao fotoana izao ary tsy latsaky ny 70 hektara ny tampon'ny avaratrandrefan'i San Juan.
Ireo fanafihana avy any ivelany izay niaretan'ny El Morro ary anisany tantara ihany koa dia fantatra kokoa ho angano ao amin'ny trano mimanda, na dia misy aza ny asa soratra manamafy ny tantarany sy izay rehetra nandalovan'ilay trano mimanda. Ny tanàna dia miankina amin'ny fivoarany amin'ny fiteny anglisy sy ny holandey nandritra ny taona maro teo amin'ny tantarany ary izany no mahatonga azy manana lanja be. Ankehitriny dia misy tranombakoka lehibe iray ao anatiny, izay ny asany dia ny antsipirihany ny ady nitranga teny amoron'ny San Juan mba hahafantaran'ny mpizahatany rehetra te hahafantatra azy ireo.
Ny fotoana farany niainan'ny trano mimanda sy hetsika lehibe dia ny nandritry ny daroka baomba an-dranomasina 1898 tamin'ny ady nifanaovan'i Espana sy Amerika. Taorian'ny hetsika vitsivitsy niaraka tamin'i Etazonia, nahazo fanamboarana ny rindriny i Puerto Rico ary afaka nanomboka nankafy fotoam-pilaminana sy fiadanam-po ny tantaran'i El Morro.
Amin'izao fotoana izao, ny El Morro dia toerana notsidihin'ireo mpizahatany, koa raha te-handehandeha any ianao dia aza misalasala, satria ho afaka hianatra zava-baovao momba ny tantarany sy ny ady ianao, ary ho fanampin'izany dia ho afaka mahazo sary tena tsara noho ny fomba fijery mahafinaritra azonao.
Ny trano mimanda androany
Raha te-hitsidika ny trano mimanda ianao dia tokony ho fantatrao fa mitentina telo dolara sy dimy dolara izany raha mividy tapakila izay misy koa ny Fort of San Cristóbal. Raha manan-janaka latsaky ny 15 taona hiaraka aminao ianao dia ho afaka mankafy ny fitsidihana ilay fort navadika ho tranombakoka maimaim-poana.
Tena mendrika ny mandoa ny vola hidirana satria manana singa mahaliana maro hita miharihary izy ireo, azonao atao ihany koa ny mandeha ao anaty sy ivelan'ny trano mimanda, noho izany dia tokony ho azonao antoka fa manana fisotroan-toaka ampy ianao hidina ao anaty fitsangatsanganana. Misy ny fivarotana fanomezana izay mivarotra tavoahangy rano koa, saingy satria fantatrao fa mety hangetaheta ny mpitsidika dia lafo ihany izy ireo.
Rehefa tafiditra ao anaty trano mimanda izy ireo dia hampiseho anao horonan-tsary fohy momba ny tantaran'ny trano mimanda mba hametrahanao ny tenanao ary ho hitanao ny maha-zava-dehibe ny fananganana sy ny maha-zava-dehibe izany tamin'ny ady rehetra. Aseho amin'ny teny Anglisy ilay horonan-tsary ary maharitra adiny iray sy sasany, nefa aseho amin'ny Espaniôla ihany koa avy eo. Azonao atao ihany koa ny mahita momba ny mpiasa ao amin'ny tranombakoka ankehitriny raha manana fisalasalana ianao. Raha tsy te-hahita ilay horonantsary ianao dia afaka maka sarintany ary mizaha ny zava-drehetra anehoana an'io fanamafisana mahatalanjona io anao.
Manao ahoana ny fanamafisana
Azonao atao ny mahita ny Kianjan'ny El Morro voalohany izay ny faritra izay niangonan'ny miaramila hanao matso sy ny fizahana isan'andro. Ny fantsakana eo afovoan'ny kianja dia toerana tsara ihany koa ary mety maharitra herintaona ny famenoana ranonorana. Ny efitrano manodidina dia miatrika ny sisiny ary nampiasaina ho trano fonenana, fitoeram-bokatra, fitoeran-javatra ho an'ny paompy, ho an'ny sela na ho an'ny toerana fitifirana ... tsy misy isalasalana fa nanana toerana be dia be ireo toerana mimanda ireo. Nisy trano fiangonana koa.
Eo amin'ny ambaratonga ambony andrefana ny Main Plaza no misy ny lalambe izay mankany amin'ny rihana ambony, Ao no ahitanao ireo rivotra misy rivotra izay manome rivotra madio amin'ireo efitrano etsy ambany. Afaka maka sary tsy mampino amin'ity faritra misy ny fiarovana ity ianao. Amin'ny ambaratonga ambony dia azonao atao ihany koa ny mahita ny jiro izay naorina indray tamin'ny 1908.
Hatrany amin'ny ambaratonga ambony dia ahitanao ny fahitana tsara ny fasana San Juan, hatrany atsinanana sy andrefana ampitan'ny helodrano no ahitanao ny taolan'ny trano mimanda San Juan de la Cruz.
Avy eo, raha te hahatratra ny ambaratonga ambany indrindra ianao dia tsy maintsy miverina amin'ny Kianja Main ary mahatratra ireo ambaratonga ambany ireo noho ny tohatra na ny lampihazo izay eo alohan'ny fidirana amin'ny El Morro na mandray ny tohatra telozoro atsinanana amin'ny kianja lehibe. Ao amin'io faritra ambany io no nisy ireo tafondro mimanda.
Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba izay rehetra miandry anao ianao rehefa mitsidika ity trano mimanda ity dia tsy mila miomana fitsangatsanganana fotsiny ianao vao hahita azy!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny tantaran'ny Morro de San Juan any Puerto Rico
tena manokana el morro, ao amin'ny sanjuan taloha tsara tarehy toerana hianarana, handehanana ary hahatsiarovako!
Tamarys dia hoy izy:
Izy io dia an'ny vanim-potoana fanjanahantany Espaniôla, izay naharitra 405 taona hatramin'ny nahitana azy tamin'ny 1493 hatramin'ny 1898, ny daty izay nifindran'ny fifanarahana tany Paris, Puerto Rico tany Etazonia.
Valiny ho an'i Tamarys
Tanàna telo hitsidika an'i Prague